ASOS 4.7.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.7.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ေစ်း၀ယ္ျခင္း ASOS
ASOS ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နံပါတ်တစ်အွန်လိုင်းကနေသွားလာရင်းထက်ပိုမို 850 အမှတ်တံဆိပ်စျေးဝယ်
ဖက်ရှင် destination သည်။
Android အတွက်အ ASOS app ကိုအတူ, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
- ကိုသင်လိုချင်တဲ့အရာ FIND & တဘက်က
သင်ဆဲသင်သည် ASOS အပေါ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တိုင်းအပိုင်းအစစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးအစား, အရွယ်အစား, အမှတ်တံဆိပ်, စျေးနှုန်းနှင့်အရောင်အားဖြင့်ရှာရန်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အခါသမယတည်းဖြတ် browse နှင့်ဝယ်ကြလော့။ Plus အား, သင့်သိမ်းဆည်းပစ္စည်းများနှင့်လည်းသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များအကြားစျေးဝယ်အိတ်ထပ်တူပြုခြင်း, - ပါရမီ။
- SUPER-လွယ်ကူ CHECKOUT ပျော်မွေ့
အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြန်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းအဘို့ငါတို့ကကင်မရာကတ်ကိုစကင်နာ (#techy) နဲ့အသစ်တခုခရက်ဒစ်ကဒ်ထည့်ပါ။
- နေရာလေးကို Sales Alert GET
ကျွန်ုပ်တို့၏တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများအဖြစ်မကြာမီအရောင်းစတင်သကဲ့သို့သင်တို့သတိပေးကြပြီးအဆုံးသတ်နေတဲ့အခါသင်သတိပေး, ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦး bargain လက်လွတ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ ချိုမြိန်!
- သင့် Pick မျှဝေ
နှစ်ဦးစိတ်ထဲတွင်ခုနှစ်တွင်? သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ချင်ပါတယ်တစ်ခုခုမြင်ဘူးသလော WhatsApp ကို, Twitter Facebook က, Pinterest, Google+ မှာနဲ့အီးမေးလ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဝငျသညျ။
- ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာ ON အဝတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ
ထိုမထိုက်မတန်ထွက်စစ်ဆေးနှင့်ဖြတ် - အဝတ်အစားဖိနပ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဘို့ငါတို့လက်မှတ်ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာဗီဒီယို app ထဲမှာလည်းဖြစ်ကြ၏။
ဒိန်းမတ်, နယ်သာလန်, စင်္ကာပူနှင့်ဆွီဒင်အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 242 နိုင်ငံများသို့ပေးပို့ဘို့ app ကိုအပေါ်အမိန့်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်နှင့်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြားနာကိုချစ်, ဒါ androiddev@asos.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ် Twitter ကို @ASOS_Heretohelp အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်သို့လိုက်နေ
Beta ကိုက! ငါတို့သနောက်ဆုံးပေါ်, အအေးဆုံး app ကို features တွေထွက်စမ်းသပ်ရန်ကူညီလိုပါသလား? https://goo.gl/aHs7zy: တစ် beta ကို tester ဖြစ်လာ
ASOS အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ASOS အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ASOS အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ASOS အား အခ်က္ျပပါ
official-app စတိုး 1.07k 1M
ASOS ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ASOS အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ ADT Media GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.asos.com/infopages/pgeprivacy.aspx
Release date: 2018-12-18 18:47:25
လက်မှတ် SHA1: E6:90:76:3A:DC:4A:87:3B:06:D5:AC:03:E1:46:07:0B:09:DE:06:57
အဖွဲ့အစည်း (O): ASOS
ASOS APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ